“Ma heli doontid qof kale oo isaga la mid ah, meel kasta oo adduunka ah” – Sánchez – Gool FM
(Milano) 13 Sebt 2019. Xiddiga kooxda Inter Milan ee Alexis Sánchez ayaa sheegay in saaxiibkiis Romelu Lukaku uu yahay shaqsi aan cidna lala bar-bardhigi Karin.
Xiddigaha Sanchez iyo Lukaku ayaa ku dhibtooday inay isku muujiyaan kooxda Manchester United, taasoo sababtay inay u dhaqaaqaan naadiga reer Talyaani ee Inter Milan.
Weeraryahanka reer Chile ayaa doonaya in mudada amaahda ah uu ku joogo kooxda Inter Milan uu la gaaro guulo muhiim ah marka loo eego waqtigiisii Old Trafford.
30 jirka reer Chile ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada ESPN wuxuu ku sheegay:
“Ma heli doontid qof kale oo isaga la mid ah, meel kasta oo adduunka ah”.
“Lukaku iyo anigu si fiican ayaan tababarka u sameynay, waxaan u baahanahay inaan kulamo badan ciyaarno, si aan u gaarno heerarkeenna ugu wanaagsan”.
“Xaaladaha Manchester United ma aysan na caawinin, sababa la xiriira isbeddelo badan, way adag tahay, Lukaku iyo anigu si fiican ayaan u tababarnay”.
“Waxaan dareemi karaa rabitaankeena ah in halkan aan ku gaaro ujeedkeena oo dhan, taasi waa sababta aan halkaan u joogo, taasi waa sababta uu Lukaku halkaan u joogo, waxaa jiri doono wax badan oo aan sheegi doono dhamaadka xili ciyaareedkan”.
Frank Lampard oo helay war aad u wanaagsan kahor kulanka bari ee Wolverhampton